တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ခြောက်သွေ့စက်သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်း Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner, Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner ကိုဆက်ကပ်
Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်း Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,ခြောက်သွေ့စက်သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,Drier သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,,
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်း Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,ခြောက်သွေ့စက်သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,Drier သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner
Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner, စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်း Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ခြောက်သွေ့စက်သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 3500 / Set/Sets
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 4000 / Set/Sets
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 3000 / Set/Sets
တရုတ်နိုင်ငံ Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner ပေးသွင်း
Pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ကတ္တရာရောစပ်စက်ရုံ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထက်ပိုဆယ်နှစ်များအတွက်ကျောက်မီးသွေး burner အတွက်ပါဝင်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ကျောက်မီးသွေးအမျိုးမျိုး၏အရည်အသွေးအဘို့သင့်လျော်သည်။ အဆိုပါကျောက်မီးသွေးအမှုန့်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက် pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ၏မြင့်အပူချိန်ဇုန်အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ, ဒါကြောင့်လောင်ကျွမ်းထိရောက်မှုမြင့်မားသည်, ထို flue ဓာတ်ငွေ့အနက်ရောင်မီးခိုးမပါဘဲတိုက်ရိုက်ဆေးရုံကဆင်းနှင့်အဖြူရောင်မီးခိုးကဲ့သို့ရေနွေးငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖြင့် MPQ pulverized ကျောက်မီးသွေး burner လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီး, နှင့်၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းခဲ့သည်။
MPQ စီးရီးကျောက်မီးသွေး burner pulverized
ထူထပ် 1. Ringelman 0-1 အဖြစ်ကျောက်မီးသွေး burner ထုတ်လွှတ်မှု pulverized;
2, ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်, အထူး firebrick တပ်ဆင်ထား။
3. က, pulverized ကျောက်မီးသွေး burner အတွက်ပြာ၏ပုံသေကာဗွန်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. 0.1%, အခြေခံအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမကာဗွန်အမှုန့်ပါပဲ။
1530% pulverized ကျောက်မီးသွေး burner 4. စွမ်းအင်သစ်ချွေတာမှုနှုန်း;
5. ယင်း burner အတွက် flue ဓာတ်ငွေ့အကြောင်းအရာမျှမ flue ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး၏အခြေအနေအောက်မှာအောက်ပိုင်း flue ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနေသည်။ ကျောက်မီးသွေးအပြည့်အဝကိုမီးရှို့လျှင်, အမျိုးသားရေးစံနှုန်းအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။
6. လောင်စာဆီကုန်ကျစရိတ်သာ 1/5 ဆီကုန်ကျစရိတ်၏အဘို့အစာရင်းကိုင်, နိမ့်သည်။
7. , အ burner ၏လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးနှင့်လောင်စာ input ကိုလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်, ထိုသို့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျယ်ပြန့်အတွက်မီးဖိုအပူချိန်နှင့်မီးလျှံအရှည်ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။
8. , အ pulverized ကျောက်မီးသွေး burner ၏ပြည်တွင်းရေးအပူချိန်လယ်ကွင်းယူနီဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအပူကိုယျခန်ဓာ၏အပူမျက်နှာပြင်ကြီးမားသည်ကို၎င်း, slag အဆိုပါ workpiece ရဲ့မျက်နှာပြင်မှကပ်မထားဘူး, နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းလှ၏။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသိမ်းဆည်း Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , ခြောက်သွေ့စက်သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , Drier သည် Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner , MRQ Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner